Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY SY NDAY: Fanjakana mpampitombo olana
INTY SY NDAY: Fanjakana mpampitombo olana
Endri-javatra iray tsikaritra teo amin’ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana nifandimby teto ny fiezahan’izy ireo mitondra fanazavana amin’ny vahoaka rehefa misy fanapahan-kevitra raisin’izy ireny izay mampitombo ny olana sy ny fahasahiranan’ny isan-tokantrano. Na fiakatry ny vidin-javatra io na ny fihanaky ny tsy fandriampahalemana na ny fianahan’ny areti-mandoza, na fihomboan’ny tsy fahalavorariana eo amin’ny fikojakojana fotodrafitrasa, na tsy fahitan’ny mpitondra vahaolana momba ny fandroahana mpiasa, sy ny maro tsy ho voatanisa e!
Kinga aoka izany ny mpitondra miseho amin’ny fahitalavitra, miteny amin’ny radio ary maneho hevitra amin’ny gazety raha vao misy fanapahan-kevitra noraisin-dry zareo ka mampitombo ny fahasahiranan’ny vahoaka. Dia miezaka mandresy lahatra sy manampempo ny vahoaka ry zareo. Mba manara-maso ihany ny tsirairay fa tsy mahatsikaritra mihitsy hoe “iny nisy tompon’andraiki-panjakana mba niezaka nandray fanapahan-kevitra ho famahana ny olana mianjady sy manalefaka ny fahasahiranan’ny vahoaka teto.”
Tato ho ato izao dia fanamarinan-tena amin’ny fiakaran’ny vidin-tsolika, amin’ny fisondrotry ny saran’ny faktioran’ny Jirama, fanampempoana ny vahoaka amin’ny tsy fitsaharan’ny asan-dahalo any ambanivohitra sy ny asan-jiolahy an-tanan-dehibe, tsy fanekena ho isan’ny tompon’andraikitra tamin’ny tranga niseho teto, toy ny fahatafavoahan’ny gadra any am-ponja na ny fitsoahan’ny vahiny nofonjaina ka lasa nitsoaka any ivelany… no nanafotra ny tontolom-piaraha-monina.
Mba samia ange manara-maso isika fa raha mivoatra mankany amin’ny fihatsarana ny fiaraha-monina sy ny tontolo manodidina ny fiainam-bahoaka any ivelany any, tsy mitsahatra mikaroka hevitra hanatsarana sy hampivoarana ny fiainana an-davanandron’ny mponina any aminy ny mpitondra isan’ambaratonga any, ny eto amintsika kosa, tsy mitsahatra mikororoso fahana ny zava-drehetra. Tsy misy fivoarana fa vao mainka mitambotsitra isika. Sanatriavin’ny vava toa olom-boaozona ny Malagasy ka ny ratsy hatrany no miseho sy vitantsika fa ny tsara toa fady ny miezaka ho aminy.
Ny eto amintsika dia lasa olana ny fananantsika harena. Lasa miteraka fahasahiranana ny fananan’ny firenena Malagasy manam-pahaizana sy vahoaka tanora tokony ho fanoitran’ny fampandrosoana sy ny famokarana. Toa manenina ny sasany amintsika raha mahita fa betsaka ny fampivoarana azo tanterahina eto fa lasan’ny sokajin’olona mpamotika firenena hatrany ny fahefam-panjakana isaky ny misy fiovana andrandrain’ny olom-pirenena.
Rehefa hitaky andraikitra amin’ny vahoaka koa ny mpitondra, toy ny fampandoavana hetra dia mila hamono olona na hanagadra olona mihitsy rehefa tsy to ny tanjony.
Ny hita ho anton’izany rehetra izany dia noho isika Malagasy, amin’ny ankapobeny, mankahala politika. Ilay politika tena mikatsaka ny soa iombonana fa tsy politika maloto iandrandrana tombontsoa manokana ho an’ny tena sy ny fianakavian’ny tena, ka lasa atao avokoa izay mety hahazoana izany, eny hatramin’ny fivarotan-tanindrazana sy ny fandrobana ny harem-pirenena na famonoana olona mihitsy aza.
Izany no mahatonga ny mpitondra hatramin’izay tsy manan-katao afa-tsy ny mitanisa sy manazava ny fanapahan-kevitra noraisiny hanampempoana ny vahoaka, fa tsy mitanisa ny vahaolana nirosoany mba hanamaivanana ny fahasahiranan’ny ambanilanitra sy hamahana ny olana miseho eo anivon’ny firaha-monina Malagasy.